Ngokuqinisekile wonke umuntu okungenani kanye empilweni yami ihlangabezane mqondo esabekayo, njengesifo sikashukela. Ikakhulukazi uma cabanga ngala maqiniso alandelayo ukuthi idatha lokuqala kule zokugula avele eGibhithe lasendulo, futhi kwesifo yayo esikhathini sethu emhlabeni 246 million. sibalo esibi ngempela. Yingakho ngamunye wethu kudingeka ukwazi okungenani ubuncane eziyisisekelo ulwazi mayelana isifo ngesikhathi ukuze ubone udokotela futhi baqala ukwelashwa njengoba adingekayo iziguli sikashukela. Yini engingayenza udle, nokuthi hlobo luni lokuphila ukuhola, indlela yokulondoloza impilo yakho - ngolwazi isiguli mayelana yonke into kanye therapy esanele kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane angaphila ukuba Esegugile nge yezinkinga ezincane noma engenazo nhlobo.
Ngakho, okokuqala kufanele uqonde ukuthi isifo esiyingozi. Ngokuyinhloko sikashukela ihlukaniswe izinhlobo ezimbili eziyisisekelo: owokuqala (insulin-kuncike) kanye yesibili (insulin-kuncike); futhi ngamunye kubo kunezimbangela ezehlukene kanye lokwelatshwa. Nokho, ngenxa yokuthi lo mshini umonakalo semithambo kanye izitho zangaphakathi abe ezivamile, okungukuthi, nokwanda kwentshiseko ahlobene e igazi glucose okuhlushwa, futhi izimpawu ezifanayo.
Izimpawu zokuqala ukuthi kungabonwa ngaso isiguli kukhona nomlomo owomile, uzizwa ukoma njalo, ukuchama kaningi, mhlawumbe ngisho ebusuku. Ngokumelene okwenza izifo ezinzima umzimba e ngifundise ngesifo sikashukela kubantu abaphethwe ukumuncwa efanele nokulungisa zonke izakhamzimba, ikakhulu carbohydrate kanye amafutha. Ngakho-ke, isiguli ungase uphawule ukuthi noma kukora noma ilahleke eziningi isisindo ngesikhathi esifushane.
Izimpawu ukuqhubekela phambili kwesifo
Ngenxa yokwehluleka amandla nezicubu semithambo kwandisa fragility zabo, ukopha inyuka isikhathi abangela umuntu elimele, isikhumba kuba ngaphansi nokunwebeka futhi equliswa kalula ukuze izilonda amagciwane fungal, ngaphezu, kuza ubuthakathaka jikelele futhi imisipha, kwehle ukusebenza, ukusheshisa umuzwa ukukhathala ngesikhathi umsebenzi. Nokho, kusukela sikashukela isifo kubonakala ukubukeka kuphela, futhi okwamanje kwezitho izinguquko ezingenakuhlehliswa elimazayo entailing eziyingozi ngesimo isifo periodontal, kolwelwesi atrophic futhi duodenitis, okunamafutha isibindi, umfutho ophakeme wegazi, isifo sokuqina kwemithambo yegazi kanti ngenxa yalokho, isifo senhliziyo, neuro- sikashukela kanye angiopathy, futhi uthi comatose.
Gwema zonke lena eyodwa kuphela indlela: ukwelashwa okufanele futhi izinkinga zakhe zempilo, ngakho-ke iyahola iziguli lesi sifo, "abantu abanesifo sikashukela sohlobo 2" - yokudla, Nokho, akuhlukile lowo yakhelwe iziguli zokugula insulini nasekuthengeni. On kuzoxoxwa kamuva, kodwa ukwenza lokhu, ukuze ufunde mayelana izimbangela zalesi izinhlungu zokugula okungathí sina, ukuze wonke umuntu angakwazi nje unake indlela yakho yokuphila.
Ngokuyinhloko isinyathelo diabetogenic uye ukhuluphele. Into wukuthi kule izicubu adipose has receptor ngoba glucose, main amandla substrate emzimbeni, futhi ushintsho yayo ku amafutha kuqinisekisa ekuchithweni kwayo efanele. Nokho, kungase futhi ukudlala okuphambene, abantu abayizibonelo ezimbi. Ngoba uma isamba ngokweqile izicubu adipose e la mangqamuzana womuntu ku amaseli zinyamalale kancane kancane, futhi ngenxa yalokho, i-glucose akanayo indawo lapho engaya, futhi liyaqhubeka aluka egazini, ngokuletha imiphumela kakade engeyinhle. Ngakho, ke baxhumana Amaprotheni egazi, kuhlanganise i-hemoglobin, esiphathiswa yedwa oksijini kuphazamisa umsebenzi wabo. Ngaphezu kwalokho, umonakalo izindonga imithambo yegazi, okuba nomthelela omubi ubuchopho, inhliziyo, izinso nezinzwa neuropathy.
Ngakho, ubizwa ekuthuthukiseni zonke lezo zinkinga, futhi ubangela eziya ziba zimbi isimo encishisiwe ukuhamba umuntu, ukuphila umzimba, ukusetshenziswa kwama-carbohydrate digestible kanye amafutha. Yingakho udokotela kufanele batshele nesineke ngifundise ngesifo sikashukela, kungenzeka ukuba into ewusizo kakhulu kuye, nokuthi cishe ebulalayo.
Enye ukuvela abantu lesi sifo - a ngofuzo, okungukuthi, ukuba khona yayo umndeni oseduze, ngoba ngenxa yalokhu kukhona nezici ezithile kuya zokugula ezinzima ... Lokhu kusho ukuthi ngisho ezinamaphutha ezincane ekudleni noma indlela yakho yokuphila isiguli enjalo ozokhula sikashukela kuba lula futhi ngokushesha kunokuba abantu ngaphandle umlando umlando womndeni. Ngakho ngabo, futhi, kufanele kube imenyu baqaphe kakhulu. Ngifundise ngesifo sikashukela, uhlobo 2 , noma 1 st - yinto kungcono ukugwema kuka ukulashelwa ukuphila.
Izimiso eziyisisekelo esikudlayo
Ukuze ukudla womuntu - akusiyo kuphela umthombo wamandla, kodwa futhi substrate esiyinhloko ukwakhiwa amangqamuzana amasha kanye nemithetho umzimba etholakalayo. Ukudla ethile edingekayo nganoma yisiphi isifo, kodwa kuphawuleka ngokukhethekile kulesi sici, uhlobo sikashukela 2.
Ukudla kule zokugula kuyinto indima ebalulekile, njengoba iphutha kancane ekudleni kuholela ngena igazi glucose, okungabangela equlekile. Iwawo jikelele ilula futhi eyaziwa kahle: ngokuphelele ukungaphuzi utshwala neziphuzo carbonated, okunamafutha kanye ethosiwe, ukudla ngokweqile okunosawoti, ukudla zifakwe emanzini anosawoti, izimpahla ezifakwe emathinini kanye nemikhiqizo inyama ezifana ayi noma ayi, lulwimi ngibhema futhi elinamanzi amaningi nenala izinongo. Isixhumanisi yokhiye ncamashi kahle glucose umzimba, futhi ngakho-ke izici eziningana banesifo sikashukela. Yini engingayenza udle ngalesi sifo nokuthi ukubala, sifunda ku.
Amandla Inani endocrinology nesineke
Njalo ucezwana lokudla umuntu akudlayo, iya elide lokuqala ngokusebenzisa pheshana emathunjini, bese ngaphakathi embhedeni semithambo kanye amaseli. Futhi ingxenye ngayinye edliwe noma enomqondo noma imele irrelevance noma harmfulness. Kakhulu ukunakekela okukhethekile umsoco yabo kufanele inikwe kulezo ziguli abanomlando lokugula uphethwe okwesabisayo "isifo sikashukela". "Yini engingayenza badle?" - umbuzo likubeka ngokucacile, futhi impendulo ngamafuphi wahlela ezihlukahlukene nezincwajana, emaphosta kanye izihloko.
Lokho, lwanele ukufunda lesi sifo, nokwelashwa kwayo izikimu netimphawu umsoco kahle zonke izakhamuzi endocrinology ngisho eziningi nezinye ubuchwepheshe, futhi zonke iziguli kufanele aqiniseke ukukhumbula ukuthi iyiphi ucezu ngokuxhamazela kudliwa ukudla isithelo esenqatshelwe kungaba alahlekelwe ukuphila kwawo! Kunalokho, nokudla ngendlela efanele kuyokusiza ubavumele hhayi kuphela yokuthuthukisa Izibikezelo lesi sifo, kodwa futhi ukuphungula isimo sabo, ukunciphisa isisindo emzimbeni. Odokotela babe izizukulwane eziningi, bhá ezingqondweni imithi Sekuyisikhathi eside ithuthukiswe zonke iziguli, ngakho-ke uhlala kuphela ukuba sivumelane nazo izincomo, it is akunzima kangako.
ukukhuluma evamile, konke kuyafana ushukela, okungukuthi ezimhlophe, sebekubeke ayikwazi ukusetshenziswa ngoba iziguli sikashukela. Yini unga Ngidla Awukude konke okunye, kodwa yinto nje ebhekene ehlukile. Iziguli kufanele uhlukane nale imikhiqizo irayisi ngofulawa emhlophe - kakolweni like nelayisi.
Noma unga yini equkethe ushukela, futhi ikakhulukazi ngokuhlanganyela inala amafutha. Konke amakhekhe, ehla, ushokoledi, ice cream, uswidi, ujamu, uju kanye nezinye amaswidi. Kubalulekile ukuba ayeke izithelo aqukethe eziningi glucose. Lokhu amagilebhisi, ubhanana, plums, cherry kanye amabhilikosi. Imikhiqizo enjalo, ngakho isiguli uzothola Hyperglycemia, futhi ungaze ungeze phezu kwezinye ukudla njengoba izithelo akakwazi ukudla. Ngaphezu kwalokho, bonke okunama-kilojoule amaningi (amafutha inyama, ayi, pates, okusemathinini e uwoyela, izimbewu namantongomane, imayonnaise) nazo akuvumelekile sikashukela. Yini engingayenza udle phakathi imikhiqizo yobisi - udaba ehlukile.
Kufanele kube nomkhawulo
Ngokwesibonelo, ukusula kusuka ukudla kwabo kufanele kube ukhilimu omuncu, ushizi, cottage shizi ngokuqukethwe namanoni engaphezu kuka amathathu. Kefir - nge okuqukethwe amanoni hhayi okungaphezu kokukodwa futhi amaphesenti nengxenye. Abanye imikhiqizo angena kanjani kulo mbuso ububanzi uvunyelwe eziningi limited. Futhi, ungahlukumezi inyama ebomvu kanye nezinkukhu (ukususa isikhumba kumele!), Okusanhlamvu, amazambane, ummbila nobhontshisi, amafutha zemifino kanye namaqanda. Kubalulekile ukudla ukuze lula ukugaya, okungukuthi, kancane kancane, hhayi kakhulu uma sezidla, ukudla ngokulinganayo usabalalisa usuku lonke. Lokhu kuzosiza ukudla kufakwe kangcono futhi kungayifinyeleli kashukela off ukuziphilisa. Uma inkulumo kabanzi mayelana okusanhlamvu, nokunye okufana nokolweni ezifunwa ngabasebenzi kanye oatmeal. akufanele isetshenziswe Pshenko futhi semolina.
Ivunyelwe yimuphi ubukhulu
Le mikhiqizo zihlanganisa zonke leyo kilojoule amancane futhi aqukethe glucose eziningi ziyantula. Lokhu imifino efana ukhukhamba notamatisi, iklabishi, isitshalo seqanda, zucchini, pepper, inhlanzi mafutha, noma yikuphi okuluhlaza fresh (isipinashi, ulethisi, Sorrel, onion, njll), Impande imifino efana izaqathe, isithombo, isithombo futhi itheniphu. Kanye ubhontshisi oluhlaza kanye amakhowe. Zonke lezi imikhiqizo kakhulu okunomsoco, egcwele amavithamini kanye fibre fibre indawo, esiza ukugaya futhi kuthuthukisa umzimba amaselula.
Insumansumane yokuthi ngifundise ngesifo sikashukela kungaba u-ginger, kuyinto engenangqondo kakhulu nokungalungile. Lo mkhiqizo eqhukethe carbohydrate, okuyinto kuphela neqhaza kwesisindo, futhi umphumela wawo esimiso senhliziyo nemithambo yegazi ingaba yingozi ngoba ngokuvamile kuhambisana zokugula in iziguli lesi sifo. Ivunyelwe ukuphuza ikhofi noma itiye ngaphandle ushukela noma nge ushukela esikhundleni, kanye lamanzi esiphethu.
Ukuze wenze kube lula ukuwakhumbula ekudleni kwakho kusiza ithebula imikhiqizo iziguli sikashukela. Kuyinto "traffic ukukhanya", irobhothi libomvu okumele ibekwe ukudla nhlobo ku-yellow - kungagcini, futhi oluhlaza - ezivunyelwe noma eliphi inani. With ezinjalo "umsizi," uzobazi ngokushesha ukujwayela ekudleni kwakho kanye accustom kuye abangane bakhe abanalesi sifo. Ngaphezu yokwelapha Ukudla, kufanele bazazi nezinye izindlela zokunciphisa esisindo: Isiko Physical, amandla wamaqhuzu, ukusetshenziswa enkulu amavithamini. It is nhlobo iziguli ngifundise ngesifo sikashukela yindlala, ngoba ingabangela iconsi elibukhali igazi glucose kungabangela ikhoma ngokomzimba noma kuholele ekufeni.
Hairpin "Bampit" iyadingeka yiwo wonke fashionista!
Hyundai HD 78 - iyithuluzi elibalulekile ezindaweni ezahlukene
Mimosa isaladi nge pink salmon - ithebula iholide umhlobiso
Kuyini ukuphana komphefumulo?